Pakistan: Blog-o-strikes back / Pakistana: Blaogy mikasika ny dona miverina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Novambra 2018 12:25 GMT
Tonga saina aho fa MIA tato amin'ny GV saingy hanambara ao amin'ny QT aho fa vita OD aho ao amin'ny FOX TV, nambaran'ny MD ho DOA noho izany ny Taham-pahaizako (QI) ananako fa ny fifandraisana PC sy DSL-ko no nanangana tamin'ny maty ny saiko.
Raha miverina amin'ny tontolon'ny aterineto, nitety ireo blaogy tiako indrindra mba hahitana ny fahana ilaina mba hanafoanana ny hery maninton'ny FOX TV. Indrisy, vao nanendry an'i Tony Snow, ilay mpanolotra vaovaon'ny FOX News ho Sekreteran'ny Gazety ao amin'ny Trano Fotsy i Dadatoa Bush ka toa hampanonofy ratsy ahy ny hahita ny tarehiny isaky ny mipoitra mba hamoaka lainga ofisialy iray hafa nosoratan'ireo mponina ao amin'ny Lalana 1600 Pennsylvania. Fa manalavitra ilay lohahevitra aho, noho izany, ndao tonga dia hijery ny angona lahatsoratra am-blaogy Pakistaney tamin'ity herinandro ity ho an'ny fanavaozana sy resakareo.
Mifantoha tsara satria hametraka fanontaniana aho avy eo.
Hitan'ny Fountainhead ny zavatra tokony ianaran'i Ahmadinejad; milaza i Windmills hoe ‘vitantsika ilay izy’; manasongadina ireo teknika fandaniana andro any am-piasàna i Suspect Paki; nandray anjara ary nanoratra mikasika ny Fahalalahana Maneho hevitra ao amin'ny Sehatra An-tambajotra Aziatika i Teeth Maestro; Miady aminà Vondrona Blaogera iray aho; mandrava ny fiverimberenan'ireo lahatsoratra amin'ny fanaovana lahatsoratra arahin-tsary i Light Within, ary farany, iverenako ny lahatsoratra arahin-tsary avy amiko natao ho an'ny daholobe.
Fanontaniana 1: Ataovy miverina in-droa ireo isa 10 voalohany mifanesy amin'ny e.
Fanontaniana 2: Inona no loko tiako indrindra?
Tsy nilaza mihitsy aho fa hikasika ireo lahatsoratra am-blaogy nasongadiko ireo ilay fanontaniana.